Robert Yamate : Voaantso teny Anosy omaly -
AccueilRaharaham-pirenenaRobert Yamate : Voaantso teny Anosy omaly
13/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsara hazava ety ampiandohana fa manana ny toerany sy maha izy azy ny masoivoho rehetra izay misy eto Madagasikara, ary ny anjara toerana izay tazonin’izy ireo dia ny fampifandraisana ny firenena malagasy sy ny firenena niavian’izy ireo avy. Noho izany io toerana izay tazonin’ny masoivoho io, dia manaraka ny fanajana hatrany kosa ny fiandrianam-pirenena izay misy sy hiasan’izy ireo, midika izany fa tsy tokony hisy velively ny fihetsika na ihany koa serasera mety hanitsakitsaka izany fiandrianana izany. Raha tsiahivina dia nisy ny fanambarana an-gazety mikasika ny tiko AAA izay notanterahin’ ny masoivoho amerikanina, ka na dia tsy nisy nipika aza ny resaka dia azo lazaina fa tsy mifanalavitra amin’io fanambarana an-gazety io no anton’ny fiantsoana. Manana ny lalàna izay mifehy aza tokoa i Madagasikara, ka tsy azon’ny any ivelany hidirana izany, na ilazany fa tokony ho sokafana ny atsy na akatony ny aria. Anjaran’ny fanjakana, ary anjaran’ny tompon’andraikitra malagasy isan’antanan-tohatra izany, ny anjara toeran’ny masoivoho kosa dia manelanelana fa tsy manome baiko.
Noho izany, vokatr’io fanambarana an-gazety izay mivaona amin’ny asa tokony hotanterahin’ny masoivoho io, dia nisy ny fiantsoana io masoivoho Amerikanina io tetsy amin’ny minisiteran’ ny Raharaham-bahiny omaly maraina, antony izany moa dia ny fampatsiahivana ny asa tanterahin’ny masoivoho, ary koa ny fanontaniana mikasika ny antony nanaovan’izy ireo ny fanambarana. Marihina fa amin’ ny maha tany tan-dalàna an’i Madagasikara dia fomba fanao tanteraka ny mampiantso masoivoho amin’ny tany demokratika rehefa misy ny tsy mazava. Tsy vao izao tokoa mantsy no nisy ny fihoaram-pefy ataon’ ny masoivoho sasany amin’ny fidirana amin’ny raharaham-pirenena malagasy, saingy andraikitry ny nomena izany no mamerina amin’ny tokony ho izy ireo izay minia mitady hiditra amin’ny raharaham-pirenena Malagasy.